श्रीमन के सोच्छन जब श्रीमती माईत वा बाहिर जान्छन ! - Sudur Khabar
श्रीमन के सोच्छन जब श्रीमती माईत वा बाहिर जान्छन !
के तपाईको श्रीमती माईत जानुभएको छ । यात त तपाई श्रीमान् छाडेर माईत जाँदै हुनुहुन्छ । श्रीमती माईत गएकाबेला तपाई के गर्नुहुन्छ ? कतै तपाईकी श्रीमती माईत गएकाबेला तपाईले गरेको गलत कामले तपाईहरुको सम्बन्ध बिग्रेको त छैन । यदी त्यसो हो भने ख्याल गर्नुस् है । तपाईको वैवाहीक सम्बन्धले तपाईको जीवनमा धेरै अर्थ राखेको हुन्छ । त्यसैले श्रीमती माईत गएकाबेला तपाईले आफ्नो सम्बन्ध सुमधुर बनाईराख्नका लागि के नगर्ने त ? यही विषयमा आज हामी तपाईलाई केही कुरा भन्दै छौँ । यसले तपाईको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ भन्ने आशा छ ।
१. पर–स्त्रीसँग नलाग्नेः यदी तपाईको श्रीमती माइत जानुभएको छ भने तपाई पर–स्त्रीसँग नलाग्नुहोस् । यसले तपाईको सम्बन्धमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ । यसरी तपाई पर–स्त्रीसँग लाग्दा तपाईको त्यतैप्रति ध्यान जानसक्छ । अनि तपाईकी श्रीमती माईतबाट आएपछि पनि तपाईलाई श्रीमतीप्रति पहिलेकोभन्दा कम आकर्षण हुनसक्छ । त्यसैले यसतर्फ तपाईको ध्यान जानु आवश्यक छ ।
२. ढीला घर नआउनेः श्रीमती नभएको मौका यही हो भनि तपाई ढीला घर नआउनुहोस् । यदी घरमा परिवार हुनुहुनछ भने पहिलेभन्दा छिटै घर आउनुहोस् । उनीहरुलाई हेरचाह र सहयोग गर्नुहोस् । कोही छैन भने पनि यताउता बरालिएर नहिड्नुहोस् । जुनपछि तपाईको बानि बन्न सक्छ । आज त श्रीमती छैन किन घर जानु या जतिबेला गएपनि भयो, भन्ने नसोच्नुहोस् । यदी तपाईलाई यस्तो बानि बस्यो भने त्यसलेपछि पनि नकारात्मक असर पार्न सक्छ ।
३. अरुसँग धेरै समय नबिताउनेः तपाईलाई एक्लो महसुश हुन सक्छ त्यस बखत । तर, एक्लै भए भन्दैमा बाहिर गएर साथीभाई सँग समय धेरै नबिताउँदा नै राम्रो हुन्छ । एक्लो महसुश भए टी.भि. हेर्ने, कुनै किताब पढ्ने, गेम खेल्ने, पुराना फोटाहरु हेर्ने जस्ता कुराहरु गर्नु पर्छ । यसो गर्दा श्रीमती आएपछि तपाईको माया छन् बढेर जान्छ र एक्लोपनि हटेको महसुश हुन्छ । श्रीमतीलाई पनि तिमी नभएकाबेला साथीसँग रमाइलो गरे भन्दा यसरी दिनहरु बिताएभन्दा खुसी लाग्नेछ ।
४. श्रीमतीलाई सम्पर्क गर्नेः श्रीमती माईत गएकाबेला उहाँ घरपरिवारका सदस्यसँग व्यस्त हुन सक्नुहुन्छ । उहाँसँग तपाईलाई फोन गर्ने समय पनि नमिलन सक्छ सबैका अगाडी तर तपाईले गरेपछि फोन नउठाउने त कुरै हुदैन । त्यसैले उसले सम्पर्क गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट हटेर मैले गर्दा अझ राम्रो भन्ने भावना राख्नु पर्छ । समय मिले च्याट गर्ने या म्यासेज गरिरहनु पर्छ । यसले तपाईको सम्बन्धलाइृ साच्चि मधुर र सदा राम्रो बनाउन सहयोग गर्नेछ ।
५. आजै हो भन्ने नसोच्नेः कतिपयले भन्ने गरेको सुनिन्छ, ‘बल्ल माईत गई ।’ कहिले माईत जाली र मैले मोज, मस्ती गर्न पाउँला । यस्ता भावना राख्नु गलत हो । तपाई उहाँसँग सयौँ जुनी जीउने कसम खाएर वैवाहीक जीवनमा बाँधिनुभएको छ । त्यसैले सम्बन्ध राम्रो बनाउनु तपाईको महत्वपूर्ण भूमिका हुने गर्छ । यस समयमा तपाईले आफ्नो सम्बन्ध विग्रने खालका त्यस्ता कुनै पनि गलत काम गर्नु हुदैन । आफ्नो भविष्य र परिवारलाई हरपल सम्झनु पर्छ तपाईले । आजै त हो भनेर आज गरेको कुनै कामले तपाईको सम्बन्ध विग्रने अवस्था आउनु हुदैन ।